Palestina: Gaza eo ambany fahirano · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Avrily 2019 5:12 GMT
Manampy ny feon'izy ireo ao anatin'ny tabataba iraisam-pirenena ny bilaogera manerana ny faritra satria tafiditra ao anaty haizina i Gaza. Nitarika fanakatonana ny tobin’ herinaratra tokana ao amin'ny farittra noho ny tsy fisian'ny solitany ny fahirano efatra andro nataon'i Israely.
Avy ao Jordania, Khalida manazava ny zava-misy eny ifotony:
Indraindray tsy ampy ny teny hamaritana izay hitantsika sy ny vaovao tsy mitsahatra manelingelina antsika isaky ny maraina raha tsy efa mahita isika fa tsy misy zavatra mahagaga antsika intsony, saingy lasa fahatairana mahatonga ny ankamaroantsika ho tsy manam-peo sy tsy manam-piarovana ny zava-mitranga ao Gaza …
Ao anatin'ny vanim-potoana sy ny fiainana izay lasa manan-danja lehibe amin'ny fomba fitantanana ny fiarahamonina ny zon'olombelona … ao anatin'ny tontolo izay mitsara ny fihemoran'ny Afovoany Atsinanana ny fiarahamonina iraisam-pirenena noho ny heloka bevava ho fiarovam-boninahitra, ny fahantrana, ny herisetra atao amin'ny vehivavy ary ny kolontsaina bontolo … mbola tsy mihetsika izany fiarahamonina [iraisam-pirenena] izany mba hijery raha fantsihana sy vonoina i Gaza … mangatsiaka ny andro ary tsy manana hafanana izy ireo… nesorina tamin’ izao tontolo izao izy ireo … ary koa matin'ny bala sy ny fanafihan'ny miaramila; novonoin'ny hanoanana sy ny hatsiaka ihany koa izy ireo
Misafidy ny hanandratra ny feoko aho mba hiteny hoe ATSAHARO… AOKA IZAY … Tsy kilalao ny fiainana fa satria hoe monina ao Gaza fotsiny izy ireo … tsy misy dikany ny fiainan'izy ireo noho ny olombelona hafa any amin'ny faritra hafa eto amin'izao tontolo izao
Umm Khalil, avy any Palestina, namoaka rohy mankany amin'ny vaovao momba ny krizy ato. Namoaka sary misy ny fipoahana baomba nataon'ny Israeliana tao amin'ny Minisiteran'ny Atitany Palestiniana ihany koa izy, izay nahafatesana vehivavy iray ary naharatràna olona 46, izay nanatrika fampakaram-bady tsy lavitra teo.
Hossam Al Hamalawy, avy any Ejipta, nandefa mailaka izay voarainy avy amin'i Mohammad Omar, any Palestina.
Hoy ny hafatra:
Aiza no hanombohana …, inona no holazaina …? Ny tsy fahampian'ny herinaratra, izay misy fiantrakany any amin'ny hôpitaly sy ny sivily? Ny daroka an'habakabaka sy ny daroka baomba isan'andro avy amin'ny tafika Israeliana, ny fikendrena tsy misy fanavahana mihatra amin'ireo sivily sy ny tobin'ny polisy …? Ny mosarena noterena nihatra tamin'ny olona 1,5 tapitrisa noho i Israely tamin'ny fanakatonana ireo sisintany rehetra ary tsy namela ny fanampiana na dia ny avy amin'ny Firenena Mikambana aza, tsy lazaina intsony ny fanafody fototra, ny sakafo sy ny fitaovana hanorenan-trano …?
Nipoitra tany Gaza ny tsy fahampian'ny solika: tsy manana herinaratra ny ankamaroan'i Gaza ary mbola zava-dehibe kokoa, mitombo hatrany ny tsy fahampian'ny fanafody any amin'ny hopitaly Palestiniana, ary ny Ministeran'ny fahasalamana mitatitra loza mitatao manoloana ny maha-olombelona.
Sa tokony hanomboka amin'ny baomba izay vao avy namely fampakaram-bady teo akaiky ny tranoben'ny Minisiteran'ny Atitany ao an-tanànan'i Gaza aho, miaraka amin'ireo tranobe 15 feno efitrefitra niharan'ilay baomba? Vehivavy iray no maty ary 47 hafa no naratra – indrindra ny ankizy sy ny vehivavy izay tao an-tranony na nilalao teny an-dalana!
Mbola ao Ejypta ihany, Zeinobia mitaraina momba ny andraikitr'i Ejipta (na ny tsy fisiany) hiatrehana ny krizy. Hoy izy:
Hatomboko amin'ny zava-misy mampalahelo momba ny anjara asan'ny Ejiptiana amin'ny maha-firenena mitarika azy ao amin'ny tontolo Arabo, toy ny hoe tsy miraharaha i Ejipta, nahita aho androany fa miantso fihaonambe Arabo maika any Kairo i Arabia Saodita mba hiresaka momba ny zava-misy ao Gaza atao Fahirano, Arabia Saodita no hany miantso fihaonambe tsy misy hatak'andro, fa tsy Ejipta, Ejipta no hany tokony hiantso fihaonambe tahaka izany avy hatrany, manaja tanteraka an'i Arabia Saodita.
Momba an'i Gaza, nanoratra ny bilaogera iray hoe:
Andeha isika ho any Gaza, iray amin'ireo zava-dratsy indrindra amin'ny olana dia manondrana etona voajanahary ho an'i Israely amin'ny vidiny mora indrindra i Ejipta izay niteraka fahavoazana ho antsika izay ao anatin'ny fahirano mahatsiravina ny mponina ao Gaza
Ny zavatra kely indrindra azon'i Ejipta atao dia ny manokatra ny sisintany ary mandefa fanampiana ara-pitsaboana avy hatrany ho an'ny vahoaka Lehibe ao Gaza izay nanafina ny miaramilanay sy ny manamboninahitray tamin'ny taona 1967.
Mampamenatra an'izao tontolo izao ny olona ary mampamenatra antsika.
Tsy manana jiro na angovo eo anivon'ny ririnina mahatsiravina i Gaza. Tetikady tsy hialàna ihany amin'ny Hamas fotsiny izany fa koa amin'ny vahoaka ao Gaza, mijaly amin'ny fomba ratsy indrindra tsy nisy toy izany ireo mponina ireo
Avy any Libanona, Green Resistance, miantso fotsiny hoe.
Fifaharana. Inona ny dikan'izany? “Ny fihetsika na ny herin'ny faharetana, ny fanoherana na fitsipahana” … ary ny “fahaiza-manaon'ny vondrona mba hiaro tena amin'ireo mpiasa mpanimba tontolo iainana”
Ao anatin'ny haizina i Gaza. Aiza ny antsoantso ataontsika? Aiza ny fanoherantsika?
Mbola ao Libanona ihany, Ibn Bint Jbeil namoaka sary hosodoko sy saritatra maromaro mba hitondra ny fijaliana ao Gaza. Manoratra ihany koa izy hoe:
Ao anatin'ny fahirano mahery setra indrindra, tsy manaja ny maha-olombelona sy mamono olona indrindra i Gaza, Palestina, ilay toby famondronan'olona lehibe indrindra eto an-tany. Andriamanitra anie hiaro sy hitahy azy ireo.